हाम्राे पिपलबाेट » गणतन्त्र कि ओलीतन्त्र ? गणतन्त्र कि ओलीतन्त्र ? – हाम्राे पिपलबाेट
गणतन्त्र कि ओलीतन्त्र ?
पन्ध्र वर्षअघिको कुरा हो । राजनीतिक दलका नेता र हजाराैं जनता राजाको प्रतिगामी कदमविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका थिए । तिनताका नेकपा (एमाले)का नेता केपी ओलीलाई भने सडकमा बिरलैले देखे होलान् । प्रायः क्लब र गोष्ठीका भाषणभिषणमा उनी भन्ने गर्थे – ए गणतन्त्र ! नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु उस्तै उस्तै हो । संयोग पनि कस्तो, गणतन्त्रको ‘ग’ सुन्न नरुचाउने उनै ओली दुई दुई पटक गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री भए ।
त्यतिमात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने छ जना नेतामध्ये सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री हुने अवसर पनि उनैलाई मिल्यो । अझ यति बेला त उनी करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् ।
नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ जारी गर्ने निर्णय लिएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको चर्को विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका ओली लगत्तै माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । पहिलो कार्यकालमा तीव्र विकास निर्माणका नारा दिए ।
भाषणमा प्रायः उनी भन्ने गर्छन् – ‘‘भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध सरकार निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनेछ । विकास निर्माणको गति तीव्र बनाइनेछ । रेल र पानी जहाज ल्याइनेछ । जनताका चुलाचुलामा ग्यास पाइप पुर्‍याइनेछ ।’’
ओलीको कार्यकालमा यति, वाइडबडी, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेसलगायतका काण्ड भए । तिनको छानबिन गरिएन, बरु दोषी भनिएका व्यक्तिको बचाउमा प्रधानमन्त्री आफैँले सार्वजनीक मञ्चको प्रयोग गरे ।
विपक्षीप्रति कुन हदसम्मको असहिष्णु व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयोग त उनी गरिरहेकै छन् । पार्टीभित्रका विरोधीलाई भित्तामा पुर्‍याउने प्रयोगशाला पनि चलाइरहेकै छन् । आफ्ना भक्तहरुलाई छानीछानी लाभका पदमा नियुक्त गरेकै छन् । अनि प्रजातन्त्र र समानताका नारा पनि दिन भ्याएकै छन् ।
त्यतिमात्र होइन, विगतमा आफैँले दिएका नारा र आश्वासनबमोजिम काम गर्न नसकेपछि जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न के कस्ता प्रचार अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने स्कुल पनि उनैले चलाएका छन् ।
कहिले आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिन्छन्, कहिले कालापानीको नक्सा जारी गर्छन् त कहिले राष्ट्रियताका मसिहाका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् ।
कोरोना महामारीका बेला जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने समयमा भक्तहरुलाई सडकमा उतारेर जयजयकार गर्न लगाउँछन् । निषेधाज्ञा तोडेर राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गर्छन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको धज्जी कसरी उडाउन सकिन्छ भनेर उनैले प्रयोशाला चलाएका छन् । महिनौदेखि पार्टीको बैठक जारी छ । तर, निर्णय कहिल्यै हुन सक्तैन । अध्यक्ष आफैँ प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्छन् । कारण दिइन्छ कार्य व्यवस्थाले समयको अभाव । तर, त्यति नै बेला उनी बालुवाटारमा छुट्टै गुटको चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आशा देखाइरहेका हुन्छन् । पार्टीभित्रवाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छोड्न दबाब परेका बेला सरकारको आयु केही समयका लागि भए पनि लम्याउन भ्याउँछन् ।
सायद रुप र सार अलग्गै मान्ने कम्युनिस्ट अभ्यास यही हो कि?
बीपीले धेरैपटक भनेका छन्– कम्युनिस्टहरूको भनाइ र गराइमा भर पर्न सकिन्न । कुरा एउटा गर्छन् । काम अर्कै । त्यसैले यिनीहरु माथि विश्वास गर्नु हुँदैन । कम्युनिस्टहरुका कारण लोकतन्त्र बलियो भएको इतिहास कहीँ छैन ।
ओलीको कार्यकाल कम्युनिस्ट चरित्र बुझ्ने, जान्ने गतिलो पाठशाला बनेको छ । सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु आज नवधनाढ्य भएका छन् । आलिसान महलमा बस्छन्, ठूला ठूला मोटर चढ्छन्, तै पनि पार्टीका दस्तावेज र सार्वजनिक भाषणमा सामन्तीको विरोध गर्न पछि पर्दैनन् ।
बौद्धिक नेता पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्र बास्तोला भन्थे – ‘‘म आलिसान बंगलामा बस्छु, लग्जरियस् गाडी चढ्छु, पाएसम्म मिठो खान रुचाउँछु । तर, गर्वका साथ भन्न पनि सक्छु यी सबै सुविधा मेरो आफ्नै सम्पत्तिबाट भोग गरिरहेको छु । यहाँका प्रायः सबै नेता मेरोजस्तै वा अझै सुविधा सम्पन्न घरमा बस्छन् तर आफ्नो हो भन्न सक्तैनन् । ठूला ठूला मोटर चढ्छन्, आफ्नो होइन भन्छन् । न त दाताको नाम नै लिन सक्छन् । नेताहरु जबसम्म मैलेजस्तै निर्धक्कसँग आफूले उपभोग गर्ने सुविधाको स्रोत खुलाउन सक्दैनन् । बुझ्नुस् भ्रष्टाचारको मूल त्यहीँ छ र नेताहरुको व्यवहारले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
यतिबेला कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । कैयाैँ नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तो बेलामा ओली पार्टीको आन्तरिक झगडामा अल्झिएका छन् र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नबाट च्युत बनेका छन् । राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
हुन त ‘सेन्स अफ ह्युमर’का दृष्टिले प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई समान देखिन्छन् । दुई दुई पटक मिर्गौला फेरेर पनि उच्च मनोबल बनाई राख्नु चानचुने इच्छा शक्ति होइन । यति हुँदाहुँदै पनि ओली धक खुलाएर बोल्न सक्छन् । हास्य कलाकारभन्दा बढी हँसाउन पनि सक्छन् । आफ्ना विरोधीको जमेर आलोचना गर्न सक्छन् । पार्टीभित्रैका विपक्षीलाई निर्मम ढंगले तह लगाउन सक्छन् र जस्तै खत गरेको भए पनि आफू निकटलाई अवसर दिने र उसको बचाउ गर्ने अद्भूत क्षमता यिनमा छ ।
दुवैमा फरक के छ भने भट्टराईले जीवनमा अपमानको कालकूट विष नै पिएर भए पनि अरूलाई हँसाए । देशको कुभलो हुने कुनै काम गरेनन् । आफ्ना कुनै नातेदारलाई लाभ हुने निर्णय गरेनन् । गल्ती गर्ने आफ्नै निकट सहयोगीलाई थाहै नदिई कार्यसमितिबाट फायर गरिदिन्थे । दुई दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका उनले कतै घरजग्गा, सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स जोडेनन् । जुन सिद्धान्त अपनाए, संस्कार र जीवन पद्धति पनि त्यस्तै अँगाले । दुई दुईपटक बालुवाटारबाट बेदाग बाहिरिए ।
हँसी मजाकमा त उनी भनिदिन्थे – ‘ए बाबु खरिदार सुब्बाको तलबले खान पुग्दैन । तिनले चिया खान मागेको सय पचास रुपैयाँ घुस होइन ।’
पछिल्लोपटक २०५६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराई ओलीजस्तै शारीरिकरुपमा कमजोर भइसकेका थिए । राम्ररी हिँड्नसमेत सक्तैनथे । त्यो कार्यकालको एउटा रोचक प्रसंग भट्टराईका तत्कालीन सल्लाहकार डा. नारायण खड्काले लेखकलाई सुनाए – ‘वद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न सहज होस् भनेर सिंहदरबारको कार्यकक्षभित्र बेडसमेत राखिएको थियो । एक दिन किसुन जी सुतेर आराम गरिरहनु भएको थियो । बाहिर भेट्नेको घुँइचो लागि सक्यो । मैले भने किसुन जी हजुर आराम गरिरहनु भएको छ । बाहिर मानिसको हुल छ । भट्टराईले भने ‘हेर्नुस् बाबु एउटा आउँछ । ठेक्का टेन्डर मिलाई देऊ भन्छ । अर्काे आउँछ कुनै फाइल सदर गर्न भन्छ । तिनको काम गर्दा देशलाई घाटामात्र छ । मैले तिनलाई भेट्नुभन्दा सुत्दा नै देशको हित हुन्छ ।’
भट्टराई र ओली दुवै दुई दुई कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भए । चौध वर्ष जेल बसे । अविवाहित भट्टराईलाई कसैका लागि सम्पत्ति जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन । विवाहित भए पनि निःसन्तान ओली सम्पत्ति जम्मा गर्नै पर्ने पारिवारिक दबाब मुक्त छन् ।
गान्धीवादी भट्टराईले जीवनभर निष्ठा, इमान र आत्मसम्मानको राजनीति गरे । आफू जलेर पनि पार्टीलाई जोगाए । लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने कुनै काम हुन दिएनन् । जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेसले गणतन्त्रको नीति लिएपछि आफैँले स्थापना गरेको पार्टी परित्याग गरिदिए । आत्मसम्मानमा आँच आउन दिएनन् बरु एक्लै बस्न रुचाए ।
कम्युनिस्ट विचारका ओलीले दोस्रो कार्यकालको मध्यसम्म आईपुग्दा विगतका वाचा पूरा त गरेनन् नै आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तामाझ समेत केही गर्छन् भन्ने विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । ओली सरकारको कार्यशैली र संस्कार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बाटोमा अग्रसर देखिन्छ । पछिल्लो समय पार्टी फुटाउन रातारात अध्यादेश ल्याएको घटना होस् वा सभामुख र विपक्षीको जानकारीविनै रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको घटना होस् सत्तारुढ दलको अध्यक्षका हैसियतमा उनले सम्पादन गरेको काम होस्, ओलीका काम कारबाहीले निरन्तर प्रतिगमनलाई नै मलजल गरिरहेको छ ।
संवैधानिक र राज्यका संयन्त्र सबल भए लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । तर, सुरुदेखि नै ओलीको यत्न प्रयत्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउनेमै केन्द्रित देखिन्छ । ओलीका कारण राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) को भूमिका विवादमा तानिएको छ, सरकारको अक्षमताले जनतामा चरम निराशा बढाएको छ । अदालतदेखि संवैधानिक निकाय सबै कमजोर र निकम्मा बनाइँदैछन् ।
आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर ओलीले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध बिगारेका छन् । सरकारका निर्णयको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ । नेता बास्तोला भन्थे – ‘कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र कति सबल छ भन्ने कुरा जननिर्वाचित सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको संस्कारमा निर्भर रहन्छ ।’
ओलीका गलत काम कारबाही र सस्तो लोकप्रियता खोज्ने होडबाजीको नेपाल र नेपालीले महँगो मूल्य चुकाउन नपरोस् ।